Sakafo: Loharanon-kery ao Nablus · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jona 2018 17:19 GMT
(Fanamarihana: nivoka tamin'ny Jolay 2013 ity lahatsoratra ity)
Manana fomban-drazana ara-tsakafo efa ela nihetezana sy maro karazana ny nahandro Levantina – indrindra ny nahandro Palestiniana. Malaza manerana izao tontolo izao ny sasany amin'ireo sakafo matsiro ao amin'ny faritra, raha toa kosa ka mbola tsy misy mahafantatra ny sasany hafa. Ny Kibbe (fampivadiana bulghur sy hena), ny musakhan (mofo arahinà sumac, tongolo, dipoavatra, ary indraindray akoho natono), sy maqluba (sakafo “mitsimbadika” ahitàna legioma nendasina sy hena ary vary)… nahandro izay anisan'ny lova ara-tsakafo eran-tany.
Tanàna any Palestina miorina ao avaratr'i Cisjordanie i Nablus, manodidina ny 64 kilaometatra avaratr'i Jerosalema. Iharan'ny olana ara-toekarena ny mponina ao Nablus noho ny haavon'ny tahan'ny ny fahantrana sy ny tsy fisian-kasa.
Ao anatin'ity toedraharaha ity, miaina anaty fepetra tsy mampitsiriritra ny vehivavy, tsy vitan'ny hoe tratran'ny famerana ara-toekarena fotsiny fa tsy ampy toerana hihaonana sy hifaneraserana ihany koa.
Kanefa, nisy kajikajy vaovao niforona: Sakafo + Nablus+ Vehivavy = Bait al Karama (teny Arabo ho an'ny ”Tranon'ny Fahamendrehana”). Araka ny tranonkalany, izy ireo dia ivontoerana ara-piarahamonina sy ara-kolontsaina mikendry ny
hanohana ny filàna ara-piarahamonina sy ara-toekaren'ny vehivavy ao amin'ny Tanànan'i Nablus Fahiny izay mitolona taorian'ny fibodoana amin'ny alàlanà orinasa sosialy mifototra amin'ny sakafo
hanintona ny sain'izao tontolo izao ho any amin'ny Tanànan'i Nablus Fahiny ho toy ny toeran-javakanto sy kolontsaina, amin'ny fanombohana tetikasa maro ara-kolontsaina sy ara-kanto mampandray anjara ny sehatra ara-kolontsaina Palestiniana eo an-toerana sy mivelatra kokoa ary ireo vahiny maneran-tany;
Mankahery ny fizahantany maharitra.
Nofaritan'ireo mpanorina azy (vehivavy telo avy any Palestina, Italia, ary Angletera) ho sekoly fampianarana mahandro sakafo tarihim-behivavy vehivavy any Palestina ny Bait al Karama, iray amin'ireo nahazo ny vatsy bitsika avy amin'ny Rising Voices tamin'ny 2012. Miara-miasa amin'ny Slow Food Iraisam-pirenena izy ary mitantana ny tenany ho toy ny orinasa misahana ny fiarahamonina.
Ny volana Jona tamin'ny herintaona, nisy atrikasa natao ho anà vehivavy 10 tao Nablus. Nandritra ny 4 andro, nianatra ny fototry ny fakàna sary sy ny famokarana lahatsary ny mpianatra, mpiasa, ary gadra ara-pôlitika taloha. Ny lohaheviny? Lova ara-tsakafo Palestiniana, mazava ho azy. Nivezivezy manerana ny firenena ireo mpandray anjara, nitafatafa tamin'ireo mpanao sakafo nentim-paharazana, ary namokatra lahatsary maro.
Ampahany amin'ny tanjon'ny Bait al Karama mba hampiroborobo ny sakafo Palestiniana manerana izao tontolo izao, manomboka amin'ny fandraisana anjara anatin'ny fihaonan'ny Terra Madre-n'ny Slow Food, ka hatramin'ny fandrosoana sakafo ny Parlemanta Eoropeana mihitsy aza tamin'ny volana Martsa. Afaka handraisana anjara ny ankamaroan'ny asany, mampianatra fandrahoana sakafo ho an'ny mponina eo an-toerana sy ireo mpizahatany, nahazoan-dry zareo toerana tao amin'ny Lonely Planet…Raha toa ka mitady fomba vaovao entina hampidiram-bola ho an'ny foibe sy hanamboarana ”toerana fihaonana ho an'ireo vehivavy avy amin'ny vondrompiarahamonina eo an-toerana” izy ireo, anatin'izany ihany koa ny fandrosoana sakafo ary ankehitriny dia ny efitrano fikarakaràna vatana sy endrika. Amin'ny ho avy, maniry ny hanokatra trano fisakafoanana izy ireo.
Ao Nablus? Afaka manoratra anarana ho an'ny iray amin'ireo fampianarana ireo ianao, ary mianatra ny fanamboarana maqluba…
Hetsika manaraka? Ho any Lôndra izy ireo ny 14 Jolay 2013 ho fanohanana ny faniriany hanokatra trano fisakafoanana – afaka mandray anjara amin'ny fanohanana ianao ary hahazo sakafo matsiro ihany koa ao anatin'izany.